Kanjani ukukhetha owesifazane iminyaka 60 isipho: imibono ezithakazelisayo
Nsuku zonke sekuseduze i yokugubha usuku, futhi yini ukunikeza - ayifiki engqondweni. Yini wesifazane ufuna, ngakho akuyona kucaca, futhi kusenesidingo iholide.
usuku ongasoze walitshalwa
iminyaka engu-60 yonke wesifazane - usuku olukhethekile. Kuye, yebo, uzilungiselele, kodwa esabe: "Mhlawumbe endaweni ethile kufihlwe usugugile?". Eqinisweni, indlela endala nowesifazane - 58, 60, noma 62 - akunandaba. Ukuphila kuyaqhubeka. Noma kunjalo, ngokukhetha owesifazane iminyaka 60, isipho, udinga ukuba efanele kakhulu, ngaphandle kokubacasula wakhe mfana. Zama ngobumnene isipho. Kufanele uma ibhekisela yobudala zihlaba, kuphela ngalabo noma amanye amasevisi. Akunakwenzeka ukuthi uzobe ikumangaze izindleko owesifazane - wayeseke wazibona eziningi esikhathini sakhe, futhi ukubaluleka isipho akuxhomekile ukubaluleka kwayo. Cishe, ukunakwa kwakho kanye nenhlonipho uzokwazi ukumthinta inhliziyo. Ngakho ake uze ukukhetha ezicashile isipho.
Ukuze induduzo kwakubenza bazizwe benethezekile endlini
Eminyakeni 60, abesifazane babe eningi ukunakwa anakekele umkhaya wakubo, izingane, futhi iningi babe nabazukulu. Lona yobudala lapho hero of the isikhathi iba umnakekeli yangempela le umndeni, ngaso sonke isikhathi ukuza iseluleko noma ukwesekwa. Indlu yakhe ngokuvamile uya wonke umkhaya. Esihle lokuzalwa isipho owesifazane (eminyakeni engu-60 ubudala) kuyoba yilowo ongeke wengeze induduzo ekhaya. Lokhu kungenziwa kahle ahlelwe samovar. Kuzoba umphelelisi ephelele eya emihlanganweni yakusihlwa phezu inkomishi yetiye. Engeza ubunye nenjabulo endlini eziphilayo imbali, isibonelo, esakaza entendeni. Kwethulwa ephethe ilambu phansi uyobheka limnandi eduze esihlalweni lapho uwayehlalise uthanda uphumule. A vase ngomusa ziwusizo ngokukhethekile ngosuku esenzeka ngalo eminyakeni engu-60 isalukazi. Isipho kuyoba ngesikhathi esifanele - cishe, Uyoletha amaningi imibala Hero of the Day. Abesifazane abaningi ngeke uthanda ngengubo efudumele, akungabazeki ukuthi angeke nje ukusiza endlini, kuleli zwe, futhi endaweni ethile on a epikinikini.
Ukuze iwenze ube lula umsebenzi wesikole
Noma yimuphi Omuny uyaqiniseka ukuthi indlu yakhe ihlanzekile, futhi amalungu omndeni Besilokhu wanelisekile futhi enelisekile njalo. Lapho ekhetha isipho ngowesifazane zeminyaka 60, khumbula ukuthi bazokujabulela njalo kunoma izesekeli lula umsebenzi endlini. Kuyoba umsizi omuhle irobhothi cleaner wezindlu, kuba mhlawumbe hhayi njengoba kahle ukuhlanza uthuli ezisemagumbini, kodwa ukuze silondoloze ukuhlanzeka ekhaya zisesimweni fair, kuyoba okwanele. Into edingekayo ekhishini, okuyinto unqobile jikelele uthando emizi - multivarka. Lokhu elula uhlobo esithandweni imbiza, Yengcweti Yethusi e kudivayisi eyodwa kunciphisa isikhathi osichitha kule owesifazane ekhishini, ngaphandle-ke kuvumela ukulungiselela inombolo enkulu sokudla okwehla esiphundu. Omunye umqondo omuhle ukuba Electric ekhaya ngoba amathini - elula, okusheshayo, kuba iminyaka yokusetshenziswa ulungisiswa ngokugcwele uqobo.
Ukuze sibe bahle
Lo wesifazane uhlala owesifazane zanoma iyiphi iminyaka. Uhlale ufuna sibe bahle futhi sisihle. abesifazane abaningi kakhulu namanje ukukhokha isikhathi esiningi ukuba azinakekele, futhi ngokuvamile ngisho nangaphezu kwalabo abangamashumi ebusheni bakhe. Ngakho kwenzekani engqondweni eguliswa yini kube owesifazane iminyaka 60, isipho, qiniseka ukhethe lokhu njengoba ibhokisi ubucwebe. Thatha isikhathi ukubheka into eyinkimbinkimbi nge sekugcineni omuhle. isipho esinjalo kungaba nenhle kakhulu. Noma yimuphi umuntu wesimame kungaba abathandwa itshali enhle abathandekayo, lubalulekile ngasiphi yobudala, futhi ukhonza njengomdala umhlobiso, phakathi kwezinye izinto, ngempela esisebenzayo. Futhi, iqhawe kwakho isikhathi ungajabulisa ngesethi entsha manicure, Amatebhe nge inani elikhulu kumadivayisi ezahlukene.
Ukuze uthuthukise impilo
Lapho umuntu owake waphila, kulapho amagugu impilo. ikakhulukazi wayethanda owesifazane oneminyaka engamashumi 60 isipho ubudala kuyoba omunye ukuthi ngeke kumsize ukunweba impilo enhle futhi unikeze kwemizwelo emangalisayo. Ngokwesibonelo, i-umcamelo ezibizayo wamathambo Luzoqinisekisa ukuthi ubuthongo owesifazane omkhulu ebusuku kanye ngakusasa ihlaba umkhosi zokuziphilisa kanye namandla. Okuningi "enothisa" umzimba kuzosiza amanzi ionizer esiliva eziyigugu. Futhi, omunye into ekhaya ukuthi kuthatha impilo yethu, kuyafaneleka ukwethula - a humidifier. Uma owesifazane ayinakho Izimo, ukusekela umzimba isesimeni esihle kuzovumela massager nekhaya sezulu esiteshini uyohlale wazi mayelana yoshintsho oluzayo ezicini umfutho womoya noma lokushisa gxuma. Ngaphezu kwalokho, uyoba ukugqamisa ukuthi kubaluleke kangakanani ngawe ukuba kunqobe ibangelwa lapho esandleni sowesifazane iminyaka engu-60 ngesimo isipho ivawusha esibhedlela, lapho angatfola uphumule ukwazi ubungqabavu.
Kubalulekile kakhulu lapho ukhetha isipho acabangele ubunjalo yomuntu, lo mkhuba wakhe. Yiqiniso, "umdlalo" eyinhloko abesifazane ngokuvamile kuba umndeni wakhe. Kodwa lokhu akusho ukuthi akunakuba neminye imisebenzi ozithandayo. Uma owesifazane yakho unesithakazelo floriculture, imnike kudivayisi elikuvumela ukuba zikhule izitshalo zasendlini ngaphandle kokuphuza ukunakekelwa. Mhlawumbe ugogo yesimanje nabazukulu phezu inthanethi? Khona-ke wajabula kakhulu esefeshinini amaphuzu computer. Ungase futhi wenze isipho owesifazane oneminyaka engamashumi 60 ubudala ngezandla zakhe. Ngokuqinisekile ithinta abazukulu ngilambatha ukusika ibhodi elilotshwe ukuthi sakhe ushe noma umdwebo. eminyakeni engu-60 ngoba abaningi yobudala ibhizinisi asebenzayo. Hero labaseminyakeni Day ayibona ifanele isipho ibhizinisi lesikhumba esikhwameni noma isikhwama esiphathwa ngesandla.
Kungakhathaliseki isipho owesifazane oneminyaka engamashumi 60 obakhethayo, qiniseka ukwelekelela ngayo, bamphathele nezimbali ezinhle! Izogcizelela ukukhanga nento hero yakho yalesi senzakalo.
Yini ukunikeza intombazane engu 10
Yini ukunikeza guy iminyaka 19? izipho Olungokoqobo, yasekuqaleni futhi kakhulu
Eau de parfum Dolce & Gabbana Thela Femme: incazelo, ukubuyekezwa
Sweet lokuzalwa isipho: amakhekhe, candy sezimbali, izipho chocolate
Umlando perfume brand "Bayredo". Perfume mahhala-enomfutho
Active eziveza kazibuthe
Sennheiser RS 170-headphone: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Indlela ukukhetha futha for uzotshala fuel
Gothic rose bokwakha
Uwoyela Peach: elisetshenziswa izimonyo
Ukulimaza kwamasayithi. Hlola isayithi. Uhlelo lokuskena isayithi lengozi
Yini amaphupho ogurets- njalo ezithakazelisayo
I-Sterlitamak ekolishi yezobuchwepheshe abaningi: ubuchwepheshe nempendulo yomfundi
Izinkuni ezinzile: ukuthi kuyini futhi kuphi isicelo?